Wararka Maanta: Arbaco, Oct 6 , 2021-Ra'iisal wasaare Abiyi Axmed oo maanta magacaabay golihiisa wasiirada cusub
Wasiirada maanta la magacaabay ayaa isugu jira kuwo cusub oo saaxadda siyaasaddu hadda ugu horeyso, kuwo xilal hore dawladda ka hayay iyo kuwo wasaaradahoodii un lagu celiyay mar kale.
Haddaba qaar kamid ah wasiirada cusub ee la magacaabay ayaa ka kala yimid xisbiyada ugu tunka wayn kuwa mucaaradka sida OLF, EZEMA IYO NAMA oo ka kala socda Degaanada Oromada, Dhabuubka (Waqooyiga) iyo Axmaarada.
Abiyi Axmed ayaa sidoo kale golaha kusoo daray wasaarado cusub sida Wasaaradda Waraabka Dooxooyinka iyo dhulka joogiisu hooseeyo oo loo magacaabay Aisha Mohamed.
Axmed Shide oo ah Wasiirka Maaliyadda isaga halkiisii umbaa loodaayay oo uu joogaa, waana wasiirka kaliya ee Dowlad degaanka Soomaalida kasoo jeeda ee ilaa hadda la hubo inuu ka dhex muuqdo golaha wasiirada maanta la dhisay.
Dadka Dowlad degaanka Soomaalida kasoo jeeda ayaa ka gaws qabsaday qaabka uu Abiyi Axmed u dhisay golihiisa cusub ee wasiirada. Waxayna noqonaysaa markii u horeysay ee hal xubin oo kaliya oo dowlad degaanka kasoo jeedaa uu heer fadaraal ka dhex muuqdo.